Jameela Jamil သည်ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုများတွင် "ဆက်စပ်မှု" ကိုတွေ့သည် - လူ - TELES RELAY
Jameela Jamil သည်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောအငြင်းပွားမှုများတွင်လူများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်
Jameela Jamil သည်ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုရန်တွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ၊ အထူးသဖြင့်သူမအနေဖြင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်ကိုယ်အလေးချိန်ဖြည့်စွက်ခြင်းအားဖြင့်အစားအသောက်မူမမှန်မှုကိုအားပေးသော Kim Kardashiann နှင့် Cardi B ကိုအပြစ်တင်သည့်အခါဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်များအသုံးပြုခြင်းကြောင့်သူမ၏သူငယ်ချင်း Meghan Markle အားဝေဖန်မှုများကြောင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားသူများအဖြစ်စွပ်စွဲခံရသည်။
သို့သော်ယခုအပတ်တွင် The Good Place မှသရုပ်ဆောင်မင်းသမီးသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အဆုံးတွင်သူမကိုယ်သူမချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းသို့မဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာလုံးလုံးလိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းခံခဲ့ရသည်ဟုလူအများကိုပြောဆိုစေခဲ့သည်။ သူ၏မတူကွဲပြားသောကျန်းမာရေးပြ,နာများ၊ ကားမတော်တဆမှုများ၊ ပျားတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောမော်ဒယ်လ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဟုခေါ်သည်။
တကယ်တော့အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်တဲ့ထုတ်လုပ်သူနဲ့စာရေးဆရာ Tracie Morrissey ကိုစတင်ခဲ့တယ် တစ်ဗိုင်းရပ်စ်ချည် သူမကသူကိုယ်တိုင်ကြေငြာခဲ့သောစိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာဆိုင်ရာအပြုသဘောဆောင်သည့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူသည် Munchausen syndrome ရောဂါခံစားခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး သည်သူသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမကျန်းမှုများခံစားနေရသောကြောင့်ဆွဲဆောင်နိုင်ရန်အကြိမ်ကြိမ်ပြုမူသော အာရုံစူးစိုက်မှု။
အသက် ၃၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော Jamil ကသူမကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်အခြားအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်ပြောခဲ့သည်ဟုငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ သူမက Morrissey ကို“ မိုက်မဲသောလူမိုက်” အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးသူ၏ရောဂါအမျိုးမျိုးကိုရှင်းပြရန်အခြားရောဂါတစ်ခုကိုအဆိုပြုထားသည်။ Ehlers-Danlos syndrome, connective တစ်ရှူးကိုသက်ရောက်မှုရှိသည့်ရှားပါးသောရောဂါ။ ဤရောဂါနှင့်အတူသူမ ငါ့ကိုပြောတယ် မင်းကမင်းကြည့်ကောင်းနေလို့လူတွေကမင်းရဲ့အနာရောဂါနဲ့မင်းဒဏ်ရာတွေကိုသံသယဝင်နေတယ်။
သောကြာနေ့တွင် Jamil က "နွားများ" တွင်ငွေဖြူများကိုလိမ်လည်သူဟုသူမမြင်သည်ဟု Ehlers-Danlos ၏ဇာတ်လမ်းကိုဆက်လက်တွန်းပို့ခဲ့သည်။
"ဒီရောဂါကမမြင်နိုင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်အရေးကြီးတဲ့စကားပြောဆိုမှုဖြစ်စေခဲ့သည်" Jamil ကတွစ်တာ။ “ အဲဒီနောက်သူတို့ကငါ SMILING ရဲ့ပုံတွေကြောင့်ငါဟာနှစ်ဆယ်နှစ်ဆယ်အလယ်လောက်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြလိမ့်မယ်။ "
Jamil က Morrissey ကို "ထူးထူးဆန်းဆန်း stalker" ဟုခေါ်ဆိုသကဲ့သို့ပင်စာရေးဆရာသည်“ လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ” ကိုယူဆောင်လာသည်။ Instagram Story Highlightဆန့်ကျင်ဘက်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်။ မင်းသမီးရဲ့ပုံပြင်ကိုအသေးစိတ်ထားတဲ့, D- စာရင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ Morrissey ၏ Highlight ဇာတ်ကားသည် The Good Place ၏ကြယ်ပွင့်သည် The Lying Place ၏တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွင်ပါဝင်နေပုံရသည်ဟု D-Listed ကဆိုသည်။
အီး! သတင်း အစီရင်ခံတင်ပြ Morrissey သည် Jameela ၏ရှင်သန်မှုနှင့်အောင်ပွဲခံပုံပြင်များတွင်အဓိကကျသည့်အပေါက်များတွေ့ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်
jameela jamil သည် munchausen ရှိပြီး "ငါယုန်တွင်းထဲကျသွားတယ်" MY ?? ဘုရားသခငျသညျ ??? @JXEKER, ယူအက်စ်လူမှုမီဒီယာအသုံးပြုသူ Morrissey ၏ပို့စ်နှင့် ပတ်သက်၍ တွစ်တာများကသူ့ကိုဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်စေရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။
ငါ "Jameela Jamil munchausen has have" နှင့်ယုန်တွင်းထဲသို့ကျသွားသည်။ MY ?? ဘုရားသခငျသညျ ??? pic.twitter.com/G2ym8kveJG
- Joe (@JXEKER) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 11 2020
သူမမြေပဲနှင့်မတည့်ကြောင်းသူမပြောသည့်ထိုသတင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ဗွီဒီယိုပင်ရှိသေးသည်။ ထို့နောက်သူမ၏အကြိုက်ဆုံးမြေပဲကို Instagram တွင်တင်ခဲ့သည်ဟု @JXEKER မှပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည် Jamil သည်“ နွားလားလား” ဟုသူတွေးမိသည်။ သူသည်သူ့အသံကိုကြိုက်နှစ်သက်။ လမ်းဘေးလူသွားလမ်းကိုတကယ်ဖြတ်တောက်လိုက်သောအခါသူကားပျက်သွားသည်ဟုသင့်အားပြောပြလိမ့်မည်။ "
Morrissey ကတည်းကရှိပါတယ် တစ် ဦး ဆုံးမပဲ့ပြင်တင်ခဲ့သည်Jamil သည် Munchausen ဝေဒနာကိုခံစားနေရသည်မဟုတ်ဟုဆိုသော်လည်း၊ လူတစ် ဦး သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများအပေါ်အလွန်အမင်းအာရုံစိုက်ခြင်းကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်သောကရောက်မှုများသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းဆောင်တာပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသည့် "somatic လက္ခဏာ disorder" ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် Morrissy ကသူမသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်မဟုတ်ကြောင်း၊
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသူမအသည်းအသန်ထွက်ခွာသွားပြီးနောက် Jamil ၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုဝေဖန်မှုများကြီးထွားလာသည်။ USA Today မှတင်ပြသည်။ သူ၏ထုတ်ဖော်မှုသည်လူမှုရေးမီဒီယာများ၏“ Legendary” တွင်တရားသူကြီးအဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခြင်းအပေါ်တုန့်ပြန်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် Madonna "Vogue" ၏သီချင်းဖြင့်လူကြိုက်များသည့်အကအခုန်၊
Jamil ကသူ့အားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိမ်လည်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်လည်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရသူများနှင့်မော်ရစ်စီဆီ - ကားမတော်တဆမှုနှစ်ခုနှင့် ပါတ်သက်၍ သူမ၏အဆိုအရသူမ၏ပြောကြားချက်အရသူမအနေဖြင့်ပြောကြားခဲ့သည် ဘီးတပ်ကုလားထိုင်၌ကျန်ရစ်၏။
Ehlers Danlos ရောဂါဆိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ပုံပန်းသဏ္becauseာန်ကြောင့်သင်တို့၏နာမကျန်းမှုနှင့်သင်၏ဒဏ်ရာများကိုလူတို့သည်အမြဲသံသယရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ #edsawareness #itisntinyourhead #imsorrypeoplearedicks
- Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 12 2020
Morrissey ၏အငြင်းပွားမှုများကိုတန်ပြန်ရန် Jamil သည်တွစ်တာတွင်မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများကိုဖွင့်ခဲ့သည်။ ထိုတွင်သူမ၏အစားအစာဓာတ်မတည့်မှုနှင့်ကင်ဆာစုတ်တံများအပါအ ၀ င်သူမ၏ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။
မြေပဲဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် Jamil ကပြောကြားခဲ့သည် 2015 ခုနှစ်တွင်အင်တာဗျူး သူသည်ခရမ်းသီးနှင့်မြေပဲကိုပြင်းထန်သောဓာတ်မတည့်ခြင်းဖြင့်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဤတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင်သူမသည်နားမကြားသောကလေးမွေးဖွားခဲ့ပြီးခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့စဉ်ကဆေးရုံမှဆင်းလိုက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင်သူမအသက် ၁၂ နှစ်တွင်သူသည် gluten စားသုံးမှုကိုခုခံအားစနစ်တုံ့ပြန်မှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်သော celiac ရောဂါရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်သူမကယာဉ်တိုက်မှုကြောင့်သူမရဲ့ကျောရိုးပျက်စီးသွားပြီးရင်သားကင်ဆာကိုကြောက်ရွံ့နေတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တယ်။
D-list ၏အဆိုအရသူမ၏မြေပဲနှင့်ဓာတ်မတည့်မှုနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများသည် Instagram ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုတင်လိုက်ခြင်းဖြင့်သူမမြေပဲထောပတ်နှင့်ပြည့်စုံသည့်မုန့်တစ်မျိုးမျိုးကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
တွစ်တာတွင်သူ၏မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများတွင်သူမသည်ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသို့မဟုတ်နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်းသူမအနေဖြင့်သွားများနှင့်ဖြူများကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်မာကျူရီအဆိပ်သင့်မှုကိုခံစားခဲ့ရသည့်အခါပိုမိုဆိုးရွားလာသည်ဟုအကြံပြုခဲ့သည်။ မိမိအစာခြေစနစ် "တွင်းဖန်တီး" ခဲ့သည်။ သို့သော်သူမလည်းဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်ပွားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဟုတ်ပါတယ်။ နှစ်ဆယ်ကျော်အတွင်းမာကျူရီအဆိပ်သင့်ခြင်း။ ဖြည့်စွက်မှု ၁၁ ခုကိုဖယ်ထားပြီးငါ့အစာအိမ်နံရံဟာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာပျက်စီးခဲ့တယ်။ မင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့အစားအစာဓာတ်မတည့်မှုတွေကငါ့အူတွေပျောက်ကင်းသွားတဲ့အခါပျောက်သွားတယ်။ နောက်မေးခွန်း
Jamil ကသူမမှာကင်ဆာရောဂါနှစ်ကြိမ်ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ယခင်တောင်းဆိုချက်တွေကိုလည်း အဆိုပါ Daily Mail ကအစီရင်ခံခဲ့သည်။ Jamil ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကရေးခဲ့တာကတော့အသက် ၂၈ နှစ်မှာရင်သားကင်ဆာကိုကြောက်ရွံ့တာဖြစ်တယ်၊ ဘယ်အလွန်အမင်းဘုံနှင့်ကြောက်စရာဖြစ်ပါတယ်။ "
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်သူမ၌မည်သည့်ကင်ဆာရှိခဲ့ကြောင်းနှင့်နောက်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုမေးမြန်းပြီးနောက်ဂျမီမီက“ 2016 နှင့် 2019 နှစ်များတွင်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကိုမှန်ကန်သောနေရာတွင်ထားခဲ့သည်။ "ကောင်းသောနေရာ" ကိုရည်ညွှန်းသည်။
ပျားများတိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး Jamil ကသူမအသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်တွင်ကားတိုက်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရသည့်ကျောရိုးနှင့်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သူမပျားမှထွက်ပြေးသွားကြောင်း D-list ကဆိုသည်။
ထုတ်လုပ်သူ Mark Ronson နှင့်အင်တာဗျူးစဉ်တွင်သူမသည်ပျားများဖမ်းဆီးရမိခြင်းခံရသည်ကို Jamil မှနောက်ထပ်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြောကြားခဲ့သည်။
Jamil က“ ဒါဟာကျွန်တော့်မှာအကြောက်အရွံ့ဆုံးပါပဲ။ "ဒါဟာသူ့ဟာသူလူတိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ပျားပေါင်း ၅၀၀ နဲ့တူတယ်။ အရမ်းဆိုးတယ် "
သို့သော် Ronson ကပျားတစ်ကောင်နှစ်ချောင်းသည်တဖြည်းဖြည်းဆူဆူညံညံအသံများထွက်နေသည်ဟုပြောဆိုပြီးရက်သတ္တပတ်များစွာအကြာတွင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုတွင်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်နည်းပါးသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပြောကြားခဲ့သည် D-list ၏အဆိုအရ
ဒါကြောင့် jameela jamil ကဒီဟာကိုရိုးရိုးလေးပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မယုံဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူကပုံကြီးချဲ့တာကိုသဘောကျတယ်။ သူမဟာပျားပုံပြင်ကိုနှစ်သက်တယ်။ ဤနေရာတွင်သူ့ကိုလိမ်ပြောရန် ronson အမှတ်အသားဖြစ်သည်
"တစ် ဦး စီသို့မဟုတ်ပျားတစ် ဦး စီသည်ဖြည်းဖြည်းချဉ်းကပ်လာ" pic.twitter.com/2cA8iKpXro
- stanwall ကျောက်စိမ်း (@zendayandnight) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 12 2020
သူ၏မီးမောင်းထိုးပြမှုတွင် Morrissey သည် Jamil ၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုသာကိုင်တွယ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ မင်းသမီးကသူမအစာစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောရောဂါများကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကကူညီပေးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
မော်ဒယ်နှင့်ဆိုင်သောတွစ်တာများတွင် D-list က Jamil သည်သူမသည်မော်ဒယ်လ်နှင့်မော်ဒယ်အေးဂျင့်တစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်းဖြင့်သူနှင့်ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲသောအသွင်အပြင်ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဆန့်ကျင်ကြောင်း၊ သူမကကျောကိုလှီးဖြတ်ပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့မော်ဒယ်ကဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး၊ ပြီးတော့သူမမှာအစားအသောက်မူမမှန်တဲ့ဆယ်ကျော်သက်မော်ဒယ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ။ "
လွန်ခဲ့သည့် ၂ ရက်အတွင်းနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားခဲ့သောဂျမေမီသည်တစ်ခါတစ်ရံစွပ်စွဲချက်များကိုရယ်မောရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။
"ဒါဟာအားလုံး Bobbi Brown Bronzer ပါ" ဟုသူမကထပ်ပြောသည်။
ဒါပေမယ့် Jamil ကလူတွေကသူ့ကို“ အသားအရောင်နဲ့ကျားမကွဲပြားမှု” ကြောင့်တိုက်ခိုက်ဖို့အကြံပြုခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတွင်သူမကသူမ၏ရပ်တည်ချက်နှင့်အခြားသူများ၏ကောင်းကျိုးကိုဆက်လက်ထောက်ခံလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
သူမပြောတာက "မင်းကိုငါမကြောက်ဘူး။ မင်းရဲ့မိုက်မဲတဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ " သူတို့ကိုလာပါစေ။ သင်ရုံငါ၏အဆက်စပ်မှုမှဆက်ပြောသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အစားအစာမူမမှန်သူများနှင့်ကလေးသူငယ်များနှင့်သူတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်မူဝါဒများကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဆက်လက်ကူညီလိမ့်မည်။ သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာမရှိပါ။ "
သင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်သင်၏မိုက်မဲသောအင်တာနက်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီများကိုမကြောက်ပါနှင့်။ လာပါစေ။ သင်ရုံငါ၏အဆက်စပ်မှုမှဆက်ပြောသည်။ ငါဟာအစားအသောက်မမှန်တဲ့သူတွေကိုဆက်လက်ကူညီပြီးကလေးသူငယ်များနှင့်သူတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်မူဝါဒများကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ သင်ဘာမှလုပ်လို့မရနိုင်ပါ။ pic.twitter.com/PttrCvifew
ZIYECH ကသူ၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စွမ်းရည်ကိုပြောဆိုသည့်အချိန် - VIDEO